The Gardener: 2012-02-12
လူများ။ မိတ်ဆွေများ၊ ကရုဏာတရား၊ ဗြဟ္မစိုရ်တရား
အသက်ကြီးလာရင် ပထမဆုံး ကိစ္စက အပေါင်းအသင်းတွေ ပိုရွေးလာရတာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
လူတွေအကြောင်းက စာအုပ်တွေထက် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။
လူတစ်ယောက်စီရဲ့ ဘ၀ထဲမှာကို ဇာတ်လမ်းကောင်းကိုယ်စီ ကြုံဖူးကြမယ်။ စကားစမြည်ပြောဆိုဖို့ အတွက် မိတ်ဆွေကောင်းတွေ ရှိတာကောင်းပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ မိတ်ဆွေဆိုးတွေ မရှိတာလည်း အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။
လူတွေက အားနာတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေဆိုလည်း တစ်သက်လုံး မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်ကြတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒါဟာ မလိုအပ်ပါဘူး။ လောကနီတိမှာပါသလို တစ်ချို့သူတွေက အနားမှာပင်ရှိသော်လည်း အနာလို မိတ်ဆွေ၊ အနားမှာနေတိုင်း ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ တချို့ကဆေးပင်တွေလို အဝေးမှာနေပေမယ့် ကိုယ့်ကို အထောက်အကူပြုတယ်တဲ့။
စကားဆယ်ခွန်းပြောလို့ ငါးခွန်းလောက်က တစ်ခုခုကို မကျေနပ်တဲ့သူမျိုးတွေကိုလည်း တွေ့ဖူးကြမှာပါပဲ။ အဲဒါမျိုးတွေကိုတော့ ဝေးဝေးကနေရှောင်ပါ။ သူ့ အကုသိုလ်ကိုယ့်ဆီကို အရောက်မခံပါနဲ့။ ဘတ်စ်ကားကြီးတွေရဲ့နောက်က ဝေးလေကောင်းလေဆိုတာကိုပဲ နှလုံးမူပြီး ဝေးဝေးမှာနေလိုက်ပါ။ စကားထောက်ပေးရအောင်လည်း သူမကောင်းဘူးထင်တဲ့သူတွေကလည်း ကိုယ့်အသိမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေရင် ခက်တယ်။ စကားလည်းမထောက်နိုင်ဘူး။ မပြောချင်နေဆိုပြီး ထားလိုက်ဖို့က မလွယ်ပေမယ့် မခက်ပါဘူး။
အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောတာထက် ပိန်ဖျင်းတဲ့ စကားကိုပြောတာက ပိုဆိုးပါတယ်။ အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာက အဆိုးမဖြစ်ရင် ပျော်ပျော်ပါးပါး ထွေရာလေးပါး ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိန်ဖျင်းတဲ့စကားကိုပြောဆိုတာကတော့ စိတ်ဓာတ် မကျန်းမာရာရောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ကျေနပ်တဲ့သူတွေဟာ မကောင်းကြောင်း လိုက်ပြောနေစရာမရှိပါဘူး။ မိတ်ဆွေတွေတွေ့ရင် ပျော်စရာစကားတွေ ပြောစရာအများကြီးရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ စိတ်ပါလက်ပါ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြောစရာတွေ များမှများပါပဲ။
သဘောထားသေးတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်ပါ။ ငါးမိနစ်မပြည့်ခင် စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်လို့ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ စိတ်မကျန်းမာတဲ့သူတွေဟာ (စိတ်မချမ်းသာတဲ့သူကိုဆိုလိုပါတယ်။ အရူးလို့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ) သူတပါးကို ခွင့်လွှတ်ဖို့လည်းခက်ပါတယ်။ ကိုယ်တစ်နေရာမှာ ခံလာရတာတွေကို တစ်နေရာမှာ ပြန်နိုင်ချင်တာမျိုးနဲ့တူပါတယ်။ အဲဒီတော့ မိတ်ဆွေတွေကလည်း ကိုယ့်စိတ်ရင်းကောင်းနဲ့ပြောနေဆိုနေတဲ့ကြားက ထထဖောက်နေတဲ့သူတွေကို ကြာရှည်မပြောဆိုချင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ပိုပြီးကင်းကွာသွားတတ်ပါတယ်။
အကူအညီလိုမှ သတိရတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို မကူညီဘဲနေကြည့်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ မိတ်ဆွေညစ်တို့ရဲ့ သရုပ်သကန်ကို ပိုပြီးသိလာရပါတယ်။ ချစ်လို့ ခင်လို့ ကူညီတာတွေကို အချိန်အားလို့၊တုံးလို့၊ အလို့ ကူညီတာလို့ ထင်နေတဲ့သူတွေလည်း မနည်းပါဘူး။ အပြင်မှာ ကိုယ်မကြိုက်တာတွေ များများ ကြုံရရင် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်လည်း သတိထားနေပါ။ စိတ်က ခူးပြီးသား ပန်းပွင့်လေးနဲ့တူပါတယ်။ သူ့ဘာသာလှပနေပေမယ့် အပူရှိန်ဟပ်ရင် ခဏလေး ပင်ပန်းဆင်းရဲပြီး ညှိုးနွမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အပူအပင်တွေနဲ့ဝေးဝေးမှာ ရေအေးအေးမှာ ရိုးတံကို စိမ်ထားမယ်ဆိုရင် အချိန်အကြာကြီး လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေကောင်းနှစ်ယောက်ရှိတာထက်၊ မိတ်ဆွေဆိုး တစ်ယောက်မရှိတာ ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းမရှိရုံနဲ့ ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး။ မိတ်ဆွေဆိုးရှိရင်တော့ တမျိုးမဟုတ်၊ တမျိုး၊ စကားတစ်ခွန်းမဟုတ် တစ်ခွန်းနဲ့ စိတ်ညစ်ညူးရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျန်းမာတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာ ဘာသာရေးသမားတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်လူတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်မှုတွေ အများကြီးရှိမနေဘူး။ သူ့ဘ၀ကိုလည်း သူကျေနပ်နေတယ်။ အဲဒီလိုလူမျိုးကို မိတ်ဆွေဖွဲ့သင့်တယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်မကျေနပ်တဲ့သူတွေဟာ ခံစားထိခိုက်လွယ်လွန်းတယ်။ အရိယာသူတော်စင်တွေမဟုတ်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေဆိုးတွေကို သည်းခံပြီး ဆက်ဆံဖို့ဆိုတာ အခါခပ်သိမ်းမလွယ်ပါဘူး။ လွယ်တာကတော့ တစ်ယောက်တည်းပျော်အောင်နေဖို့ပဲ။ တစ်ယောက်တည်း ပျော်အောင်မနေတတ်သူတွေဟာ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ဖို့ အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ လိုနေတာတွေကို ဖြည့်စွက်ဖို့လိုအပ်ချက်အတွက်ပဲ မိတ်ဆွေကို လိုတယ် ဆိုတာမျိုးဟာ ရိုးသားစစ်မှန်တဲ့ဆက်ဆံရေးမဖြစ်စေပါဘူး။
ကိုယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ပြောဖို့ပဲမိတ်ဆွေလိုအပ်ပြီး အဲဒီမိတ်ဆွေ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ နားညည်းခံပြီး နားမထောင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူမျိုးတွေကတော့ တစ်လမ်းမောင်းမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နည်းတဲ့သဘောနဲ့ အတ္တကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးလူတွေကို ကြုံရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ သူတို့ကိုဒေါသဖြစ်နေမလား။ နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရမလား။ စိတ်ထိခိုက်ရမလား။ ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်သည်းခံတဲ့သူတွေ ခွာသွားပြီး စရိုက်တူတွေနဲ့ တွေ့ရပြီး သူ့တို့ဘာသာသူတို့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သိကောင်းသိသွားမယ်ထင်ပါတယ်။ (သိချင်မှလည်းသိလိမ့်မယ်)မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ မိတ်ဆွေကို ကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အားလို့အသင့်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့အသင့်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကျင့်မတူလို့ ဝေးဝေးမှာနေပေမယ့် အကူအညီလိုရင် ပေးမယ့်သူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေဟာ စိုသောလက်ကို မခြောက်စေတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ့ရင် တန်ဖိုးထားဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။
(-- ဒီအထိက အတည်ကြီးတွေရေးနေတာပါ။ --)
မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်ဟာ 50% အရေးကြီးတယ်လို့ အရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်တော့ဗုဒ္ဓက dear son အာနန္ဒာ don't talk so (twice) ဆိုပြီး မြစ်(တားမြစ်)ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းဟာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတွက်တောင် cent percent အရေးကြီးပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းစာမေးပွဲသာ Objective type ဆိုရင် ဧတဒဂ် သုံးဘာသာဂုဏ်ထူးရခဲ့တဲ့ အရှင်အာနန္ဒာ ဒီစာမေးပွဲမှာကျဖို့ရှိပါတယ်။
သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ ဂျူးလိယက် ....ဆီဇာ ခင်ဗျားအဖြစ်ဟာ ..... လူယုံသတ်လို့သေ၊ တကယ်မယုံနိုင်စရာပဲဟေ ဆိုတာ .. ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းက ဆိုပါတယ်။ ဘရူးတပ်စ်က အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား သတ်သင့်လို့ သတ်လိုက်တာပါ။ တကယ်တော့ ဂျူးလိယက်ဆီဇာကောင်းဖို့ သတ်လိုက်တာပါပဲ။ မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ သံသရာအထိ အကျိုးများတာပါပဲ။
ဟစ်တလာမှာလည်း ဂေါ်လီရိုက်ဖက် သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်လောက်ရှိခဲ့ရင် ကမ္ဘာကြီးမှာ လူမျိုးကြီးစစ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲ လျော့နည်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။
ကမ်ဂျုံအီဆိုရင်လည်း Gtalk ဖြစ်ဖြစ်၊ facebook ဖြစ်ဖြစ် သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒုံးကျည်ဆောက်မယ့်အစား ပဲခေါက်ဆွဲဝယ်စားလိုက်ကြရင် တစ်နိုင်ငံလုံး အရသာရှိရှိဖြစ်သွားမှာဆိုတာကို သူ့ဝေါလ်မှာ/သူ့ chat box မှာ မိတ်ဆွေတစ်ချို့က့ ရေးပေးခဲ့နိုင်မှာပဲ။
ခရစ်ဝင် ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်လည်း ဘုရားသခင်ဟာ အပင်ပန်းခံပြီး ခုနစ်ရက်လောက် အလုပ်လုပ်နေမယ့်အစား chess board တစ်ခုနဲ့ chess pieces တွေဖန်ဆင်းပြီး Grand Master တစ်ယောက်ကို မိတ်ဆွေအဖြစ်ဖန်ဆင်းပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး စစ်တုရင် ကစားနေလိုက်ရင် အခုလောက် ကရိကထ များဖို့မရှိဘူးထင်မိတယ်။
မိတ်ဆွေကောင်းမရှိတဲ့အခါ လူတွေဟာ အစွန်းရောက်ကုန်တယ်။ Depression ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်တဲ့သူတစ်ယောက် သူငယ်ချင်းရဲ့ခွေးကလေးကိုပဲ ချစ်စရာရှိတယ်ဆိုတာကို ဆရာတော် ဦးဇောတိက စာအုပ်မှာဖတ်လိုက်ရတော့ အတော်လေး တုန်လှုပ်သွားတယ်။ ဇနီးသည်ကတောင် တုန်လှုပ်တာကို သဘောမပေါက်ဘဲ ရုတ်တရတ် ဘာတွေ ကနေတာလဲလို့မေးခဲ့သေးတယ်။ တုန်ပြီးလှုပ်တိုင်း ကတယ် မထင်နဲ့လို့ ရှင်းပြခဲ့ရသေးတယ်။ အထီးကျန်တဲ့ဘ၀ဟာ သနားစရာသိပ်ကောင်းတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းမရှိတဲ့ဘ၀၊ မိတ်ဆွေဆိုး အစုံအလင်နဲ့ဘ၀ တော်တော် အဖြစ်ဆိုးတယ်။
ဟိုတစ်နေ့က ဖိုးစိန်ရဲ့ blog မှာ သေခြင်းတရားဆီတိုးဝင်နေတဲ့ နေ့ရက်တွေနဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်အကြောင်းဖတ်လိုက်ရတယ်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ လောကကြီးဟာ ၀မ်းနည်းစရာပိုကောင်းလာတယ်။ ကမ္ဘာကျော်လူဆိုးတွေ သက်ဆိုးရှည်နေတဲ့ခေတ်မှာ ကလေးလေးတစ်ယောက် ရောဂါအရ အသက်ဆုံးဖို့ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ သူ့မှာ မိတ်ဆွေရှိရဲ့လား။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကရော သူ့ကို လွမ်းနေကြမှာလား။ သေခြင်းတရားဟာ တံခါးမှားပြီး ခေါက်တဲ့ စာပို့သမားတစ်ယောက်လား။ ကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်။ ကလေးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းကောင်းလေးတွေ ရှိဖို့လိုတယ်။ သေခါနီးအချိန်အထိ ချစ်ခင်နေတဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းလေးတွေပေါ့။
သူငယ်ချင်းမရှိတဲ့သူတွေဟာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ နေရာင်မရှိတဲ့ အမှောင်ခန်းထဲမှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေလိုပဲ။ ချိနဲ့တယ်။ မှောင်မိုက်တယ်။ ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ ဆိတ်သုဉ်းတယ်။ တော်တော်လေး ချို့တဲ့တဲ့ ဘ၀ဖြစ်သွားတယ်ထင်မိတယ်။ မနေ့ညက သစ္စာနီရေးတဲ့ ကလေးစာပေတွေဖတ်တယ်။ အဲဒီတော့မှ ဦးရဲရဲဦးဟာလည်း သစ္စာနီဆိုတာသိတယ်။ တခြားနာမည် ဘယ်နှမျိုးနဲ့ရေးနေသလဲတော့မသိဘူး။ သိုင်းစာအုပ်တောင် ရေးတယ်ဆိုတော့ သူ့မှာလည်း ကလောင်ဝှက် ဆယ်ခုလောက်ရှိပုံရတယ်။ ကလေးတွေအတွက် စာပေကောင်းလိုတယ်လို့သူထင်တယ်။ အဲဒါမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ စာပေကောင်းထက်လိုတာ သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ သူအခုအထိ လူပျိုကြီးဖြစ်နေတာ အောင်သွယ်ပေးမယ့် သူငယ်ချင်းကောင်းလိုနေတာလို့ ကျွန်တော်ထင်မိတယ်။ (လမ်းကြုံရင် သူ့ကို ကျွန်တော် အဲဒီလိုထင်တာလေး အကြောင်းကြားပေးလိုက်ကြပါဦး)။
တံခွန်မရှိသော ကုက္ကားသည်မတင့်တယ်၊ အမှိုက်မပါသော အမှိုက်ကားသည် မတင့်တယ်၊ မသာ မပါသော အသုဘယာဉ်သည် မတင့်တယ်၊ မိတ်ကပ်မပါသော လေယာဉ်မယ်သည် မတင့်တယ်၊ှQR code မပါသော ကြော်ငြာသည်မတင့်တယ်၊ ရင်သားအစွန်းထွက်မှ မပေါ်သော မော်ဒယ်သည်မတင့်တယ်၊ တစ်နေ့အနည်းဆုံး တစ်ခါ မ like ကုန်သော facebooker သည်မတင့်တယ်၊ အစရှိသဖြင့် မတင့်တယ်ကြခြင်းများတွင် မိတ်ဆွေကောင်း၊ သူငယ်ချင်းကောင်းမရှိကုန်သော လူ့ဘ၀သည် မတင့်တယ်။ သို့သော် သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်စေ၊ မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်စေ၊ လွယ်လွယ်နှင့်မရနိုင်။
မနေ့မနက်က အိမ်တွင် ဘုရားအနေကဇာ တင်ပါတယ်။ အနေကဇာတိ သံသာရံ = Hey တဏှာ Male Carpenter, I found you. ကို ပြန်ပြီး မြန်မာမှုပြုတဲ့အနေနဲ့ အနေကဇာတင်တယ်လို့ခေါ်တာပါ။ အဲဒီအတွက် ဇနီးသည်က မနက်အစောကြီး ချက်ပြုတ်စရာရှိတာချက်ပြုတ်ပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းနဲ့ကလည်း မိတ်ဆွေတွေလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘုန်းဘုန်းဘုန်းချင်တာရှိရင်ပြောပါဆိုပြီး မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဟိုတစ်ခေါက်တုန်းက ဘုန်းဘုန်း သုံးပါးပင့်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျောင်းမှာ ဘုန်းဘုန်းတွေ မအားတာနဲ့ မိတ်ဆွေ ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးထဲကြွလာပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အဲဒီလို မဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီး ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးတည်းပင့်ပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းက အမှတ်မှားပြီး သုံးပါးကြွလာပါတယ်။ ကိစ္စမရှိဘူး pasta လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး ဇနီးသည်က ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပါတယ်။
အရင်ဝယ်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲက အလုံးအကြီး ၁၃ မိနစ်ပြုတ်ရပါတယ်။ ထပ်ဝယ်လာတာက Angel Hair ဆိုတဲ့ ခေါက်ဆွဲအလုံးအသေးပါ။ နှစ်မိနစ်ပဲပြုတ်ရပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ခုကို ရောပြီး ပြုတ်လိုက်တော့  အတော်လေးရှုတ်ထွေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။
အိမ်က အမတစ်ယောက် ၀င်ကူညီတာနဲ့ အတော်လေးအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဘုန်းကြီးဖြစ်စေ၊ လူဖြစ်စေ၊ မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ပါး အားနာစရာမလိုပါဘူး။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါပဲ။ အပိုဆုအနေနဲ့ကြွလာတဲ့ ရဟန်းတော် နှစ်ပါးအတွက် လှူဖွယ်ကတော့ ၀ယ်မထားတဲ့အတွက် ၀တ္ထုပဲကပ်ပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်းတို့ကို ကပ်ဖို့ ၀တ္ထုသွားထည့်လိုက်လို့ ဇနီးသည်က ပြောတာနဲ့ အခန်းထဲဝင်ပြီး ဂျူးနှစ်အုပ်၊ မင်းခိုက်စိုးစန်နှစ်အုပ်စီထည့်နေတုန်း ဇနီးသည်ဝင်လာပြီး ဒါက ဘာလုပ်ဖို့လည်းဆိုတော့ ၀တ္ထုကပ်မလို့လုပ်နေတာလို့ပြန်ဖြေတဲ့အခါ အရင်က အရယ်အပြုံးနည်းလှတဲ့ ဇနီးသည်က မပြုံးဘဲ ၀ါးလုံးကွဲရယ်လိုက်တာ 110 dB ကျော်လောက် ကျယ်လောင်သွားပါတယ်။ (ဥပမာအနေနဲ့ကတော့ လျှပ်စစ်လွှမော်တာသံဟာ ၁၁၀ ဒက်ဆီဘယ်လောက်ရှိပါတယ်။) ၀တ္ထုဆိုတာ အဲဒါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ကပ္ပိယ ဝေါဟာရတွေနဲ့ သိပ်မရင်းနှီးပါဘူး။
ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ပြန်အကြွ taxi ငှားတော့ Taxi က အတော်ကြာကြာငှားရပါတယ်။ နောက်တော့လည်း အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ မလေးရှားမှာလည်း ထေရ၀ါဒ ဘုန်းကြီးတွေက လူတွေကို အကူအညီပေးတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ လူသားအချင်းချင်း ယိုင်းပင်းတာဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲ။ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံမှာတောင် ကြိုးစားပြီး စေတီတော်တစ်ဆူတည်လိုက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါဟာဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်။ ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို ရောက်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာ ကိုးကွယ်စရာ ဆည်းကပ်စရာရှိတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ သံဃာဖြစ်စေ၊ လူဖြစ်စေ၊ အချင်းချင်း မေတ္တာ၊ကရုဏာနဲ့စောင့်ရှောက်ကြရင် မိတ်ဆွေဆန်တာပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ မိတ်ဆွေရှိရင် ရှိတဲ့မိတ်ဆွေကို တန်ဖိုးထားဖို့နဲ့ မိတ်ဆွေဆိုးရှိရင် မသိမသာလေး block list ထဲထည့်ထားဖို့ သတိသံဝေဂရပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မိမိစိတ်ဟာ မိမိရဲ့ မိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ဖို့နဲ့ မောင်မောင်ရဲ့စိတ်ဟာ မောင်မောင်ရဲ့ မိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ဖို့၊ မိမိနဲ့ မောင်မောင်နဲ့ဟာ စိတ်ရဲ့ မိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ဖို့၊ ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးစီဟာ ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးစီစိတ်ရဲ့ မိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ဖို့ Jim Carrey ရဲ့ Me Myself & Irene မှာလို စိတ်နှစ်ခွတွေကလည်း စိတ်နှစ်ခွစလုံးရဲ့ မိတ်ဆွေများဖြစ်ဖို့ အထူးတလည် ကြိုးစားဆောက်တည်သွားရမှာပါ။ ။
ပျော်ရွှင်သော နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေ။ ။
Thanks bro yeyene for his artwork. (All friends pee holding hands together!!!)